လော ရှည် - က တဲ့ ပွဲ: လူမျိုးရေးအရ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း ပုံစံသစ်၏ သာဓက တစ်ခု
Posted by Law Shay at 11:29 PM
လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုကတော့ လက်ခံနိုင်စရာ လုံးဝမရှိပါဘူး။ ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းကျမှ လျော့ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးတာက ပိုဆိုးတော့တာပေါ့။
ပြည်ပရောက်နေတုန်းမှာ ကိုယ့်လူမျိုး ဂုဏ်သိက္ခာညှိုးနွမ်းရမယ့် အလုပ်မျိုးကို ရှောင်ရှားကြရင် အကောင်းဆုံးပါပဲ။
နိုင်ငံခြား အတော်များများမှာလည်း ဒီလိုမြန်မာချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံတာတွေများနေပြီဗျ....၀န်ဆောင်မှုပေးတယ်ဆိုတာ..တခြားနိုင်ငံသားတွေအတွက်ပဲ ခံစားခွင့်၇ှိနေတာမျိုးလားလို့ တောင်မေး၇မလို ဖြစ်နေပြီ...ဒါပေမဲ့ တခြားလူမျိုးတွေကတော့ ၀န်ဆောင်မှုကိုတပြေးညီပေးပါတယ်..ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းမှဗျာ..ဘာလို့ ခွဲခြားချင်နေကြပါလိမ့်
Yes, for me, it is strange.
This is the first time I was treated like this (Even those staffs from notorious Science and Technology Ministry, Myanmar never treated me like this before nor the staffs from the Passport section under Myanmar immigration).This is the first time I saw something awful like this.
၁။ ကိုယ့်အလှည့်တုန်းက ခံလိုက်ရလို့လည်းဖြစ်မယ်။
၂။ အခြားလူမျိုးခြားတွေကြားမှာ မြန်မာကို အထင်သေးစေမယ့် အပြုအမူတွေလို့ထင်လို့လည်း ဖြစ်မယ်။
၃။ ကိုယ်တိုင်က လူမှုရေးစိတ်ဓါတ်ခေါင်းပါးတဲ့သူလည်း ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဘာဘဲပြောပြော..ဒါမျိုးက သံသရာလည်သွားတာမျိုးဖြစ်ရင် မကောင်းပါ။ ဒါမျိုးတွေ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းပါ။ မြန်မာဆိုတာ ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးလေ။
မြန်မာ အချင်းချင်း အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် လေသံက သိသာပါတယ်... သူ့အင်္ဂလိပ်က မြန်မာမှန်းမသိသာ နိုင်လောက်အောင် ကောင်းနေလို့လား... သူအဲလိုဆက်ဆံနေရင် ကိုယ်ကလဲ ရင့်ရင့်ပေါ့... ကွန်ပလိန်းလုပ်လဲရတာပဲ... ခံမလာနဲ့လေ...
အောက်ဆုံးက စာကြွင်းမှာတော့ အိမ်သာကို မြန်မာပေးမ၀င်ဘူးလို့ပြောတာ သူတို့အလွန်ဆိုပေမဲ့... ကိုယ်ကလဲ အစထဲက စည်းကမ်းလိုက်နာပြီး ကွမ်းတံထွေးမထွေးသင့်ဘူးထင်တယ်... ဘယ်သူမှတော့ လူမုန်းမခံဘူးဆိုပေမဲ့ ထွေးနေတဲ့သူရှိရင်လဲ မလုပ်ဖို့ အချင်းချင်း တားမြစ်သင့်တယ်... ကိုယ်က အစထဲက သူများအပြောမခံရအောင် နေသင့်တယ်လို့ထင်တာပါပဲ...
တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တွေ့ဖူးတဲ့ အကောင်းဆုံး ၁၀ ယောက်ထဲမှာတော့ မပါဘူး။
I realize "discrimination" is based upon personal attitude.
As Sayagyi Shwe Oo Daung said "if your happy or sorrow by other side's deal, you stand by other people's mnd and your body".
I alwats think "To jubilant stay in own coordinate".
အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကောင်းတာမကောင်းတာနဲ့တော့ မဆိုင်ပါဘူး
တစ်ချို့စလုံးမှာ အနေကြာတဲ့မြန်မာတွေ အင်္ဂလိပ်စကားပြောရင် စလုံးလေသံအတိုင်းပါပဲ... မြန်မာလို့သာ မသိထားရင် စလုံးလို့ပဲထင်မိမှာပါ
blueskyforest ကနေတဆင့် ပထမဆုံးရောက်လာပါတယ်။ နိုင်ငံခြား ရောက် မြန်မာများ အချင်းချင်း ကူညီရိုင်းပင်းဖို့ထက် မြန်မာ စကားပြောမိရင် ကို ပြန်ပြီး နှာခေါင်းရှုံ့ အထင်သေးချင် တဲ့ခေတ် အခါ သမယ မို့ လားမသိဘူး။ ဒီလို ခဏခဏ မြင်ရ ကြားရတယ်။ ကွမ်းသွေး ကိစ္စကတော့ စားတဲ့သူတွေရဲ့ စည်းကမ်းမရှိမှုကြောင့် ဖြစ်ရတာ များပါတယ်။ ဘေစင်ထဲ ထွေးချတယ်..ဘေစင် ပိတ်ရင် ဒီတိုင်းထားခဲ့တယ်။ အိမ်သာထဲ မြင်မကောင်းအောင် ထွေးကြတယ်...။အမှိုက်ပုံးတွေထဲလဲ မြင်မကောင်းအောင် ထွေးကြတယ်။